ပရိသတ် တွေကြား စိတ်ဝင်စားဖို့ အရမ်းကောင်းတဲ့ ဖြူဖြူကျော်သိန်းနဲ့ ကျော်ထက်အောင်တို့ရဲ့ အချစ်ရေး…. – Shwe Naung
ပရိသတ် တွေကြား စိတ်ဝင်စားဖို့ အရမ်းကောင်းတဲ့ ဖြူဖြူကျော်သိန်းနဲ့ ကျော်ထက်အောင်တို့ရဲ့ အချစ်ရေး….
N N | January 1, 2021 | Celebrity | No Comments
ပရိသတ်ကြီးရေ အသံပါဝါ အားကောင်းကောင်းနဲ့ အမိုက်စား သီချင်းတွေကိုပါဖောမန့်အပြည့်နဲ့ ဖျော်ဖြေတင်ဆက်လေ့ရှိတဲ့ အဆိုတော် ဖြူဖြူကျော်သိန်းကတော့ ပရိသတ်တွေကို အမြဲ အထူးအဆန်းတွေလုပ်ပြလေ့ရှိတဲ့ အနုပညာရှင် တစ်ယောက်ဆိုတာကိုတော့ အထူးတလည် ပြောစရာ မလိုတော့ဘူး ထင်ပါတယ်နော် ။
သူမရဲ့ အမိုက်စား ဖက်ရှင် တွေကတော့ ချစ် ပရိသတ်တွေကြားမှာ အမြဲရေပန်းစား လေ့ရှိပြီး ပရိသတ်တွေကို အံ့အားသင့်စေတဲ့အနုပညာရှင် တစ်ယောက်ပါ ။
‘Myanmar Idol’ အစီအစဉ်တွေမှာ အစီအစဉ် တင်ဆက်သူ အဖြစ် ပါဝင်ထားပြီး ချစ် ပရိသတ် အခိုင်အမာ ရရှိလာတဲ့ ‘ကျော်ထက်အောင်’ကလည်း လက်ရှိမှာတော့ ရုပ်ရှင်မင်းသား တစ်ယောက်အနေနဲ့ရပ်တည်နေကာ ချစ် ပရိသတ်တွေရဲ့ အားပေးမှုအခိုင်အမာရရှိထားပါတယ်။သူဟာ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးတွေမှာ ပါဝင် သရုပ်ဆောင်နေပြီး သရုပ်ဆောင်ပီပြင်လွန်းတာကတော့ အကယ်ဒမီ ဆန်ခါတင် စာရင်းဝင်တဲ့ အထိပါပဲ။သူရဲ့ သရုပ်ဆောင်မှု တွေကလည်း အရမ်းကောင်းလွန်း ပါတယ်နော်။
‘ဖြူဖြူကျော်သိန်း’ကတော့ လူမှုကွန်ယက်ဖေ့ဘွတ် စာမျက်နှာပေါ်မှာ တင်ပေးလေ့ရှိတာကြောင့် ပရိသတ်တွေကလည်း တကယ့်ချစ်ကြိုက်နေကြပြီလို့ ထင်နေကြတာပါပဲနော်။ဒီနေ့မှာ လည်း ‘ဖြူဖြူကျော်သိန်း’က ”💖အချစ်စစ်လား အချစ်တုလား ဆိုတာ… နှလုံးသားကပဲမြင်နိုင်တာ…တကယ်ကိုအချစ်ရှိတယ်💕Caption”ကိုယ် လူမှုကွန်ယက်ဖေ့ဘွတ် စာမျက်နှာထက်မှာ ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
အချစ်စစ် တို့ရဲ့ ကြည်နူးစရာ ပုံရိပ် လေးတွေ ကိုယ်လည်း ချစ် ပရိသတ်ကြီး အတွက် ဖော်ပြပေး လိုက်ပါတယ်။ပရိသတ်ကြီးလည်း ဖြူဖြူနဲ့ ကျော်ထက်အောင် တို့ရဲ့ အချစ်ဇာတ်လမ်းကို စိတ်ဝင်စား မယ်ထင်ပါတယ်နော်။ကဲ…ဖတ်ရှုအားပေးသော ချစ်ပရိသတ်ကြီး လည်းသာယာ‌ ပျော် ရွှင်သောနေ့လေး ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ ဆုတောင်းပေး လိုက်ပါတယ်။
ချစ် ပရိသတ်ကြီးရော ဘယ်လိုမြင်လဲဆိုတာ ပြောပြပေးသွားပါဦးနော်။
Source:Phyu Phyu Kyaw Thein FB’s Account
နာမည်ကြီးရေပန်းစားနေတဲ့ သားစစ်ရဲ့ အသံနဲ့ သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ နှုတ်ခမ်း နီမလေးတွေအသဲစွဲ ‘ဘုန်းမင်းနေလနဲ့ ပိုင်အုပ်စိုးအောင်’တို့နှစ်ဦးရဲ့ ဗီဒီယိုလေး…
လိုင်းပေါ်မှာ အပြည့် အဝ အားပေးနေတဲ့ ချောမောလှပနေတဲ့ အိချောပို ရဲ့ ဗီဒီယိုလေး
ယင်ဖို တောင်မနား ဖူးဘူး အပျို စစ်စစ် ဖြစ်ကြောင်း ဗီဒီယို ဖိုင်နှစ် တကွ ဒဲ့ချ ပြရှင်း ပြလိုက်တဲ့ မမဆောင်း